Fizarana fizarana aorian'ny fisafidianan'ny Ghost - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>Step>mg>Fizarana fizarana aorian'ny fisafidianan'ny Ghost
Fizarana fizarana aorian'ny fisafidianan'ny Ghost
2. Fanarenana ny fizarana aorian'ny Fanahy diso.
Rehefa mampiasa rindrambaiko Ghost hamerenana ny rafitra dia noho ny hadisoana fandidiana, indraindray fanodikodinam-pandeha diso tanteraka amin'ny fisarahana iray manontolo. Amin'ity vanim-potoana ity, afa-tsy amin'ny fisarahana vaovao naverina amin'ny laoniny izay ny haben'ny kapila mafy (C drive), tsy misy ny fety hafa. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy mampiasa koa ny fomba fikarohana ianao ho an'ny fisarahana very. Ny fahasamihafana dia ny latabatra fizaram-potoana amin'izao fotoana izao dia tsy mitombina sy tsy misy hadisoana. Noho izany, rehefa mikaroka amin'ny fomba mandeha ho azy, ny Bplandatarecangana dia hitazona ny fiara C be dia be hita, ary tsy hita ny familiana hafa. Noho izany, tsy maintsy mampiasa ny "Advanced mode" ianao rehefa mitady fisarahana. Anjaran'ny mpampiasa ny manapa-kevitra izay fizarana ilainao haverina. Ireo safidy ho an'ny fikarohana dia mitovy amin'ny voalazan'ny teboka 1 etsy ambony.
Tsara homarihina fa aorian'ny fanombohan'ny fikarohana dia hitatitra avy hatrany ny fahitana ny C C lehibe aorian'ny fanarenana tsy nahy. Amin'izao fotoana izao, azafady, aza mifantina "Reserve". Mitovy ny fomba fiasa mandeha ho azy, tsy ahitanao fety hafa haverina averina. Tokony hisafidy "Ignore" (na "Hizoroa") mandra-pahitan'ny fety hafa tianao ho sitrana, ary misafidy "Tazomy" rehefa marina ny rakitra ao amin'ilay fisarahana.
Rehefa vita ny fikarohana dia hita ny fizarana D sy E izay tokony haverina, dia misy zavatra marihina rehefa mamonjy ny latabatra fisarahana. Raha mihazakazaka Bplandatarecovery amin'ny rafitra Windows vaovao ianao aorian'ny fanarenana tsy nahy, dia mety hipoitra avy hatrany ny lozisialy manga na ny toe-javatra tsy mahazatra. Ara-dalàna izany, satria rehefa avy nitahiry ny latabatra fisaraham-batana, ny latabatra fisarahana dia tsy manana C drive intsony ampiasain'ny rafitra fiasa, izay midika fa manapotika ny rafitra mihazakazaka ny hetsika. Satria ny tanjonay dia ny mamerina ny angon-drakitra hafa noho ny C drive, ary ny drive C ankehitriny dia misy fiantraikany amin'ny drive hafa, tsy misy fomba hidirana azy. Rehefa rava ny rafitra dia tsy maintsy averinao indray ny rafitra fandidiana, aza manandrana miverina, mamerina fotsiny ny rafitra. Alohan'ny hamerenana ny rafitra dia mila mamorona fiara vaovao C ianao dia afaka mampiasa rindrambaiko Bplandatarecesy hamorona sy hananganana azy, na azonao atao ny mamorona amin'ny alàlan'ny programa fametrahana ny rafitra. Amin'ity vanim-potoana ity, tsy maintsy mandinika isika, tsy maintsy mamorona fisarahana C ary hametraka ny rafitra amin'ity fizarazarana ity, tsy mety ho diso. Raha tsy azonao antoka dia adikao ny kapila naverina averina amin'ny kapila mafy hafa alohan'ny hametrahana ny latabatra fisarahana, ary avereno indray ny rafitra.
Ny fahombiazan'ny fahombiazana aorian'ny fanorohana Ghost dia mifandray amin'ny karazana C drive system. Raha ao amin'ny endrika FAT32 ny C disk, ny taham-pahombiazan'ny fahombiazana amin'ny disks hafa dia avo dia avo, satria ny FAT32 dia ampiasaina ao anaty filaharana hatrany am-piandohana ka hatramin'ny farany ary amin'ny ankapobeny dia tsy manimba ny angon-drakitra kapila hafa. Raha ao amin'ny endrika NTFS ny drive C dia sarotra kokoa ny zava-misy aorian'ny famerenana amin'ny laoniny ny kapila mafy C amin'ny alàlan-diso. Satria tsy raikitra ny fampiasana ny fizarana NTFS manomboka eo am-piandohana ka hatramin'ny farany, mety hanimba ny angon-drakitra kapila hafa.
3. Simba ny fisarahana.
Raha tsy very ny fisarahana dia azo jerena ao amin'ny "My Computer" na "Management Management" ny fisarahana. Na izany aza, rehefa aseho ho "Unformatted" na koa manery fa tokony hamboarina rehefa vantany vao misokatra dia aseho ny toetra toetra amin'ny fizarana hoe "RAW", na tranga hafa izay tsy ahitana rakitra, manondro fa simba ny fisarahana. Amin'ity tranga ity dia mila mampiasa ny fiasa "File Recovery after incorrect Format" ianao. Ny fomba fiasa dia ny misafidy aloha ny fisarahana ho sitrana, ary avy eo tsindrio ny bokotra "Recover File" eo amin'ny boaty fitaovana, alaivo ny boaty fifampiresahana "Mamerina ny fandehanana", safidio ny "File Recovery aorian'ny fika diso" ary mifidiana ny karazana systeme file alohan'ny format Afaka manomboka mitady ianao. Ny lisitry ny rakitra notadiavina dia haseho ao amin'ny seha-pifaneraserana lehibe rehefa vita ny fikarohana .. Ny rakitra na lahatahiry tsirairay dia manana boaty fizahana eo alohany. Zahao ny fisie mila alaina, ary tsindrio ny bokotra havanana totozy raha mitsoka ny menio mba handefasana ireo rakitra amin'ny fety hafa. Raha mila toromarika momba ny antsipirihany, azafady jereo ny antontan-taratasy fanampiana amin'ny rindrambaiko "File Data Recovery".
4. amin'ny toe-javatra sarotra kokoa, very ny fisarahana ary tsy azo tadiavina.
Raha mampiasa safidy fikarohana isan-karazany ianao ka tsy mahita ilay fisarahana rehefa very ny fisarahana, dia midika izany fa simba ilay sehatry ny fizaram-paritra, ka mahatonga azy tsy ho hitady ny fizotran-kevitra. Amin'ity tranga ity dia raha te hamerina ny angon-drakitra ianao dia manahirana kokoa ny miasa.
PreFamerenana mahery vaika amin'ny alàlan'ny rakitra U disk
NextFanarenana rafitra fanimbana rakitra